WOWOW Donsela Phansi Ikhishi Tap Nikeli Ebhulashi - Ompompi Basekhishini Abangcono Kakhulu 2021 | Ompompi Basegumbini Lokugezela Abangcono Kakhulu | I-WOWOW Faucets
Ikhaya / Ikhishi Faucets / Donsela Phansi Oompompi Bekhishi / I-WOWOW Donsela phansi i-Nickel ye-Brush Tap
Wowow Donsela phansi Ikhishi Thepha Br Brows Nickel
Isibambo esisodwa esisebenza kahle, esithembekile nesiphephile sidiliza isikebhe ekhishini.
Yonga isikhathi esiningi nomsebenzi wabasekhishini, kungaba ukuthuthwa kwendle noma ukupheka.
Isikhiphi sisebenzisa izingxenye ezingumgogodla ezingenisiwe ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo.
Isikhiphi sekhishi siyi-nickel 2310201
Kungani ukhetha isikebhe esisekelweni sekhitshi eline-brick nickel ngaphezulu kwesikhiphi ekhishini se-chrome? Well, asikho lapha ukuxoxa ngokunambitheka. Ukunambitheka kuyenzelwa futhi kunoma yikuphi ukunambitheka kukhona isixazululo esimnandi. Siyabona ukuthi abantu abaningi basaqhubeka bethanda izihlungi zasekhishini ze-chrome ngaphezulu kwama-faicket we-nickel. Kodwa-ke, amafulethi ekhishini we-nickel briking ayawina ukuthandwa minyaka yonke. Akusizi ngalutho, iningi labamagazini abaklami basekhaya iningi lezikhathi lifaka amashini ekhishini we-nickel ekhishini ekwakhiweni kwekhishini labo. Akunandaba noma imayelana nemiklamo yasendulo noma ukwakheka kwekhishini kwanamuhla. Yize i-chrome inika ukuthinta okukhazimulayo ekhishini, isikulufu esisekelweni sekhishi esine-nickel nakanjani singeza ukuthinta kokubukeka kunoma yikuphi ukwakheka kwekhishini. Amahhotela amaningi anezinkanyezi ezinhlanu afaka i-nickel faucets, ngoba nje kunikeza ukugqagqana ekhishini. Ngezinto ezincane ezinjengefenisha yasekhishini ungafinyelela umthelela omkhulu njengoba ubona.
Ingabe isikebhe ekhishini silinyazwa ngakho-ke futhi kubiza kakhulu uma kuqhathaniswa nefenisi ekhishini le-chrome? Akunjalo. Ikakhulu hhayi e-WOWOW. I-WOWOW ikwazile ukwenza ngcono inqubo yayo yokuthengwa kwemali ifinyelele phezulu. Futhi ngokuhambisana neziza zayo zokukhiqiza ezisetshenziswa kakhulu, i-WOWOW iyakwazi ukukhipha iziqobelo zekhishi ezisezingeni eliphakeme ngamanani ashibhile, noma ngabe zakhiwe nge-nickel noma i-chrome eyakhiwe. Uzothola izinzuzo kusuka kulwazi olubanzi lweWWOW ukukhiqiza amakhompiyutha asekhishini aphezulu afunwa emhlabeni wonke.
Isikhiphi se-design ekhishini se-nickel
Abaqambi abanesibindi be-WOWOW ngaso sonke isikhathi baphatha ukuletha amakhethini wepheki ekhishini angalungela ngqo kunoma yimuphi umagazini okhethekile wasekhaya wokuklama. Le faucet ekhishini etholakala nge-nickel ene-nickel enobuhle, eyisitayela, nesincane kodwa esisebenzayo yonke. Umklamo wayo ungowesimanje, kepha ungafanelana cishe kunoma iyiphi ikhishi. Zonke izinyathelo nobukhulu bucatshangelwe kahle nokuthi uqaphela emiphumeleni yalesi siqeshana sobuciko besikhathi sasekhishini.
Isikebhe esiphakeme sekhishi le-arc eliphakeme sinikeza ukubukeka okuhle, okunesitayela ekhishini lakho ngokujwayelekile nekhishi licwila ikakhulukazi. Ngoba ungaguqula ifenisha ephezulu yekhishi le-arc ekhishini, isikulufu sakho sokudla ekhishini ngeke sibe sendleleni nganoma yisiphi isikhathi. Ungavele ususe kahle isikebhe esikhulu se-arc siye kwesobunxele noma kwesokudla ngendlela onokwazi ngayo ukufinyelela kusinki yakho ekhishini.
Isikhiphi semishini yasekhishini ehlukahlukene
Okokuqala isikebhe esisekelwa ekhishini seWOWOW sinikeza imisebenzi emithathu yamanzi. Ngomsinga wayo, fafaza noma umise ikhefu ungasebenzisa isikebhe esisebenza ngemishini ekhombisa ukusebenza kwe-WOWOW ukugcwalisa amanzi, ukufafaza ukusikha noma ukusimisa ukugwema ukusakazeka. I-Neoperl ABS-aerator esezingeni eliphakeme ingonga amanzi aze afike ku-50%, ozowabona kumbhalo wakho wamanzi. Futhi lokho ngaphandle kokuyekethisa ekusebenzeni kokusakaza. Okwesibili, isici esiyinhloko salesi sikhwanyana se-ekhishini esine-nickel yi-hose amanzi anobuyiseleki. Ungadonsa inhloko yokufafaza isuswe kufenisha ukuze ifinyelele kunoma iyiphi indawo ngaphakathi nezinki zasekhishini lakho. Lapho usuqedile ngomsebenzi wakho wokuhlanza, ikhanda lokufafaza lizobuyela esimweni salo sokuqala.
I-lever ingaphathwa ngesandla esisodwa, ukuze ngaso sonke isikhathi sibe nolunye uhlangothi mahhala imisebenzi yakho yasekhishini. Lever yethiphu ekhishini ihamba kahle kanti nokho ubona izinto ezisezingeni ezisetshenzisiwe. Ngeke uzwe ukubuyela emuva kwanoma iyiphi indlela. Kokubili izinga lokushisa lamanzi namandla wamanzi kungalawulwa kalula ngale nsimbi engenasici.
Izinto ezisezingeni eliphezulu zekhishini isikulufu sefenisha
Njengoba kushiwo ngaphambili, i-WOWOW isebenzisa kuphela izinto ezisezingeni eliphakeme ukukhiqiza izikejana zayo zasekhishini. I-disc ye-disc ngokwesibonelo yenziwa nge-nickel ehlanganisiwe futhi isikebhe ekhishini ngokwaso senziwe ngensimbi engenasici. Ngokubambisana nokwakhiwa kwethusi okuqinile, isikebhe ekhishini esenziwe nge-nickel yeWOWOW simelana nokuklanywa nokugqwala. Lokho kwenza le faucet yasekhishini le-nickel yekhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu.
Iphayiphu lamanzi elingabuyiseki kalula elingamamitha ayi-1,5 lenziwe ngejeli le-silica. Ngakho-ke ayinasigqoko futhi iqinisekisa ukusebenza okubushelelezi ngenkathi kukhipha i-hose. Ngenxa yebhola elisindayo njengesisindo esiphikisayo, amakhanda okufafaza athole ukumelana okwanele ukukunikeza induduzo ephezulu yokuyisebenzisa.
Isikhiphi sekhishi ngenani elihle kakhulu lemali
Ngenxa yokwakhiwa kwawo nekhwalithi yezinto zokwakha nokuqedwa kwayo, ungalindela ukuthi isikebhe sokukhishini sithengiswe ngentengo efana ne-A-brand yomhlaba wonke eyaziwa emakethe. Kepha akukho okuyiqiniso! Le faucet ekhishini ene-nickel ebunjiwe ingabizi kakhulu futhi ekhishini lokuklama isabelomali unganikeza lesi isikebhe sokudla ekhishini esinikeza ukuqina kwesikhathi eside ekusebenzeni okuphezulu.
Iwaranti yeminyaka emihlanu isebenza emafektri wasekhishini we-WOWOW. Ku-WOWOW sinethemba elikhulu lokuthi i-nickel yekhishi lethu eline-nickel elizosebenza lizosebenza kakhulu futhi ngeke likubangele inkinga. Uma isikebhe sokudla ekhishini esenziwe nge-nickel singeke sisebenze ngendlela okufanele sisebenze ngayo, siyomane sithathe indawo yomkhiqizo ngaphandle kwenkinga. Uzoqinisekiswa ngekhwalithi eqhubekayo nokusebenza ngaso sonke isikhathi.
Isikhiphi sekhishi sicijile ukufakwa kwe-nickel
Isikhuhlu sokukhanyisa ekhishini esineziteketiso siza ne-Creative Quick Connect Technology. Ngenxa yokwakhiwa kwayo kokuxhuma koqobo, kulula ukuthi ukufakwa wedwa. Awudingi ipayipi elizokubiza imali eningi. Ngezinsimbi ezifakiwe, umhlahlandlela wokufaka kanye nevidiyo yokufaka ku-inthanethi, uzokwazi ukufaka lesi isikebhe sokukhishini se-nickel esivele ngemizuzu engama-30.
Akumangazi ukuthi isikebhe ekhishini esenziwe nge-nickel yeWOWOW asisetshenziswanga emakhaya, kepha amabhizinisi amaningi njengezindawo zokudlela nemigoqo futhi asisebenzisa lesi isikebhe ekhishini. Njengoba kushiwo ngaphambili, isikebhe esisekhishini esine-nickel sinikeza ukuthuthukiswa kweqiniso kunoma iyiphi ikhishi. Futhi ngokusebenza kwayo okuphezulu, ilungele imigoqo nezindawo zokudlela, ikakhulukazi lezo ezinekhishi elivulekile. Le nqenqemeni ekhishini yokwakheka ifakwa njenge-nickel inikeza ukwedlula kunoma iyiphi ikhishi. Amakhasimende amaningi ezentengiselwano aphesheya asethembe i-WOWOW ngemishini yayo nokubaluleka kwemali ayinikezayo. Siyaqiniseka ukuthi nathi sizokuthola ukwethenjwa kwakho!
Izinzuzo zethenisi lasekhishini ezihlanganisiwe nge-nickel ngamafuphi:
 Idizayini enhle ye-arc ephezulu
 Izinto zensimbi ezingagxili nethusi
 izindlela ezi-3 zamanzi
 Ukudonsa kabusha i-hose yamanzi
 Kulula ukuyifaka nge-Creative Quick Connect Technology
I-SKU: 2310201 Categories: Ikhishi Faucets, Donsela Phansi Oompompi Bekhishi Tags: I-Nickel ehlutshiwe, I-Hole eyodwa, fafaza
55 x 28 x 7 cm; 2.58 Amakhilogremu
I-nickel ebhulashiwe 700
Donsela phansi isifutho